ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စွဲဆိုချက် အမှုသွား အမှုလာ
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ်စွဲဆိုထားတဲ့အမှုကို အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးနေပါတယ်။ မြန်မာစစ် ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ BROUK ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင်ကိုယ်တိုင် ကြာသာပတေးနေ့မှာ တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ အမှုအသွားအလာအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ ဦးထွန်းခင် နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်ဦးတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး၊ ကိုဇော်မိုး ကျော်ကတင်ပြပေးပါမယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော် ။. ။ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို Universal Jurisdiction နိုင်ငံတကာတရား စီရင်ရေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်ရာဇ၀တ်မှုကိုမဆိုလက်ခံကြားနား စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြန်မာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ BROUK ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင်က ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ကသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ထွက်ဆိုခဲ့တာကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။
ဦးထွန်းခင် ။. ။ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး စနစ်တကျစီမံကိန်းချထားပြီး ကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်တာတို့ သွားလာခွင့်ပိတ်ပင်တာတို့ လက်ထပ်ခွင့်ပိတ်ပင်တာတို့ လယ်ယာမြေသိမ်းခဲ့တာတို့ နိုင်ငံသားအဖြစ်သိမ်းခဲ့တာတို့ ကျနော်တို့က ၂ဝ၁၇နှစ်မှာ စစ်တပ်ကနေ ရွာတွေမှာ ရက်ရက်စက်စက် မိန်းကလေးတွေကို အဓမ္မပြု့ကျင့်ခဲ့တယ်ဗျာ။ ယောက်ကျားလေးတွေကို လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ ရွာပေါင်း၃၈ဝ ကျော်ကို မီးရှို့ခဲ့တယ်ဗျာ။ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ သူတို့ထွက်ပြေးရတယ်ဗျာ။ IIMM နဲ့ သူတို့မှာ အထောက်ထားတွေအများကြီးရှိတယ်။ အများကြီး အမုန်းတရားပျံ့ပွားအောင် လုပ်ခဲ့တာ ဖေ့ဘုတ်ကနေ အထောက်အထားရနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။. ။ အခုအာဂျင်တီးနားမှာလုပ်နေတဲ့ တရားရုံဟာဘယ်လောက်အထိ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလဲ၊ သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေခိုင်မာမှုရှိနိုင်ပါသလား၊ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးမင်းလွင်ဦးက အခုလိုမြင်ပါတယ်။
သက်သေထွက်ဆိုချက်တွေအပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တာပေါ့နော်။ အရင်တုံးကတော့ မူခင်းတွေဖြစ်ရင် ကိုယ်တိုင်တွေ့၊ ကိုယ်တိုင်ကြား တိုက်ရိုက် သက်သေခံချက်တွေကိုပဲ အရင်က လက်ခံခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဒီလိုသက်သေခံချက်တွေကို ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယို စသဖြင့် နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာ တင်သွင်းလာတဲ့ကိစ္စတွေကို တရားရုံးတွေက လက်ခံဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့သိရပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော် ။. ။ ဒီတရားစွဲဆိုမှာရိုဟင်ဂျာတွေဘက်က ကူညီပါဝင်ပေးနေသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့် အရေးကိစ္စတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်လာခဲ့တဲ့ Tomas Quintana ပါဝင်ကူညီပေးနေပြီး သူ့မှာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေရှိကြောင်းနဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ IIMM လိုအဖွဲ့တွေလည်း ပါဝင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်အထောက်အထားတွေခိုင်လုံနိုင်တယ်လုိ့ ဦးမင်းလွင်ဦးကသုံး သပ်ပါတယ်။ အခုတရားရုံးမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်က တရားရုံးလာမတက်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
ဦးမင်းလွင်ဦး။. ။ တရားရုံးကို လာရောက်ခြင်းမရှိရင် တဖက်သတ် ကြားနာတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားမှာပေါ့နော်။ တရားလိုဖက်က တင်သွင်းတဲ့အထောက်အထား၊ တရားလိုပြတွေက တင်သွင်းတဲ့ သက်သေခံချက်တွေ စသည်အချက်လက်တွေကို မူတည်ပြီးတော့မှ ဆွဲချက်တင်သင့် မတင်သင့် ချမှတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့က မြင်ပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော် ။။ တကယ်လို့ပေါ့လေ ဒီတရားရုံးကနေ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူနိုင်ပါသလဲ။ ဖမ်းဆီးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါသလား။ ဘယ်သူတွေ လုပ်နိုင်ပါသလဲ၊
ဦးမင်းလွင်ဦး ။. ။ အဲဒါမျိုးကတော့ အင်တာပို နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ဖမ်းနိုင်တဲ့အလားလာရှိပါတယ်။ အင်တာပို ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံက စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက Rome Statute ကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေ၊ Common Law ကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို သွားရင်တော့ အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းသိထားပါတယ်။
ကိုဇော်မိုးကျော်။. ။ အခုလို Universal Jurisdiction နိုင်ငံတကာ ဥပေဒအရ နိုင်ငံတကာတရားရုံးတခုမှာ တရားစွဲဆိုပြီးရင်၊ ဒီတရားရုံးမှာ တင်သွင်းတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီး နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုခုံရုံး ICC လို့ တရားရုံးမှာ ဆက်လက်တရားစွဲဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်လာနိုင်တယ်လို့ ဦးမင်းလွင်ဦးကသုံး သပ်ပြော ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှု စှဲဆိုခကျြ အမှုသှား အမှုလာ
ရိုဟငျဂြာတှအေပျေါမှာလူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုဆိုတဲ့စှပျစှဲခကျြနဲ့ မွနျမာစဈခေါငျးဆောငျတှေ အပျေါစှဲဆိုထားတဲ့အမှုကို အာဂငျြတီးနားတရားရုံးမှာကွားနာစဈဆေးနပေါတယျ။ မွနျမာစဈ ခေါငျးဆောငျတှကေိုတရားစှဲဆိုခဲ့တဲ့ ဗွိတိနျအခွစေိုကျ မွနျမာရိုဟငျဂြာအဖှဲ့ BROUKဥက်ကဌ ဦးထှနျးခငျကိုယျတိုငျ ကွာသာပတေးနမှေ့ာ တရားရုံးမှာထှကျဆိုခဲ့ပါတယျ။ တရားရုံးမှာ ထှကျဆိုခဲ့တဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ အမှုအသှားအလာအခွအေနတှေကေိုသိရှိနိုငျဖို့ ဦးထှနျးခငျ နဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးရှနေ့ေ ဦးမငျးလှငျဦးတို့ကိုဆကျသှယျပွီး၊ ကိုဇျောမိုး ကြျောကတငျပွပေးပါမယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော ။.။ မွနျမာနိုငျငံက လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖေါကျမှုတှကေိုUniversal Jurisdiction နိုငျငံတကာတရား စီရငျရေးဆိုတဲ့ နိုငျငံတကာဥပဒရေဲ့ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ အာဂငျြတီးနားနိုငျငံတရားရုံးမှာတရားစှဲဆိုခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ ဒီနိုငျငံတကာဥပဒအေရ ကမ်ဘာပျေါကဘယျရာဇဝတျမှုကိုမဆိုလကျခံကွားနား စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ဒီတရားရုံးမှာတရားစှဲဆိုခဲ့တဲ့ မွနျမာရိုဟငျဂြာအဖှဲ့ BROUK ဥက်ကဌ ဦးထှနျးခငျက ဒီဇငျဘာလ ၁၆ ရကျနကေ့သူကိုယျတိုငျသှားရောကျထှကျဆိုခဲ့တာကိုအခုလိုပွောပွပါတယျ။
ဦးထှနျးခငျ ။.။ အဓိက ကတော့ ကနြျောတို့ ရိုဟငျဂြာလူမြိုးတှကေို နှဈနဲ့ခြီပွီး စနဈတကစြီမံကိနျးခထြားပွီး ကြောငျးတကျခှငျ့ပိတျပငျတာတို့ သှားလာခှငျ့ပိတျပငျတာတို့ လကျထပျခှငျ့ပိတျပငျတာတို့ လယျယာမွသေိမျးခဲ့တာတို့ နိုငျငံသားအဖွဈသိမျးခဲ့တာတို့ ကနြျောတို့က ၂ဝ၁၇နှဈမှာ စဈတပျကနေ ရှာတှမှော ရကျရကျစကျစကျ မိနျးကလေးတှကေို အဓမ်မပွု့ကငျြ့ခဲ့တယျဗြာ။ ယောကျကြားလေးတှကေို လညျလှီးသတျဖွတျခဲ့တယျဗြာ။ ရှာပေါငျး၃၈ဝ ကြျောကို မီးရှို့ခဲ့တယျဗြာ။ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ ရိုဟငျဂြာတှေ သူတို့ထှကျပွေးရတယျဗြာ။ IIMM နဲ့သူတို့မှာ အထောကျထားတှအေမြားကွီးရှိတယျ။ အမြားကွီး အမုနျးတရားပြံ့ပှားအောငျ လုပျခဲ့တာ ဖဘေု့တျကနေ အထောကျအထားရနိုငျတယျဆိုတာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။.။ အခုအာဂငျြတီးနားမှာလုပျနတေဲ့ တရားရုံဟာဘယျလောကျအထိ ထိရောကျမှုရှိနိုငျပါသလဲ၊ သကျသထှေကျဆိုခကျြတှခေိုငျမာမှုရှိနိုငျပါသလား၊ လူ့အခှငျ့အရေးရှနေ့ေ ဦးမငျးလှငျဦးက အခုလိုမွငျပါတယျ။
သကျသထှေကျဆိုခကျြတှအေပျေါမှာ အမြားကွီး မူတညျတာပေါ့နျော။ အရငျတုံးကတော့ မူခငျးတှဖွေဈရငျ ကိုယျတိုငျတှေ့၊ ကိုယျတိုငျကွား တိုကျရိုကျ သကျသခေံခကျြတှကေိုပဲ အရငျက လကျခံခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးတှမှော ဒီလိုသကျသခေံခကျြတှကေို ဓါတျပုံ ဗှီဒီယို စသဖွငျ့ နညျးပညာတှေ တိုးတကျလာတဲ့အခါမှာ တငျသှငျးလာတဲ့ကိစ်စတှကေို တရားရုံးတှကေ လကျခံဆောငျရှကျတယျဆိုတာကိုလညျး ကနြျောတို့သိရပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော ။.။ ဒီတရားစှဲဆိုမှာရိုဟငျဂြာတှဘေကျက ကူညီပါဝငျပေးနသေူဟာ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလူ့အခှငျ့ အရေးကိစ်စတှကေိုနှဈပေါငျးမြားစှာလုပျလာခဲ့တဲ့ Tomas Quintanaပါဝငျကူညီပေးနပွေီး သူ့မှာခိုငျလုံတဲ့အထောကျအထားတှရှေိကွောငျးနဲ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ IIMM လိုအဖှဲ့တှလေညျး ပါဝငျနတော ဖွဈတဲ့အတှကျအထောကျအထားတှခေိုငျလုံနိုငျတယျလုိ့ ဦးမငျးလှငျဦးကသုံး သပျပါတယျ။ အခုတရားရုံးမှာ ပွဈမှုကြူးလှနျတယျလို့စှပျစှဲခံရတဲ့အထူးသဖွငျ့တော့ မွနျမာစဈတပျနဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှဘေကျက တရားရုံးလာမတကျဘူးဆိုတော့ ဘယျလိုဖွဈနိုငျပါသလဲ
ဦးမငျးလှငျဦး။. ။ တရားရုံးကို လာရောကျခွငျးမရှိရငျ တဖကျသတျ ကွားနာတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျသှားမှာပေါ့နျော။ တရားလိုဖကျက တငျသှငျးတဲ့အထောကျအထား၊ တရားလိုပွတှကေ တငျသှငျးတဲ့ သကျသခေံခကျြတှေ စသညျအခကျြလကျတှကေို မူတညျပွီးတော့မှ ဆှဲခကျြတငျသငျ့ မတငျသငျ့ ခမြှတျသှားလိမျ့မယျလို့ ကနြျောတို့က မွငျပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော ။ ။ တကယျလို့ပေါ့လေ ဒီတရားရုံးကနေ ပွဈမှုထငျရှားတယျဆိုပွီး ဆုံးဖွတျခဲ့ရငျ အပွဈကြူးလှနျသူတှကေိုဘယျလိုအရေးယူနိုငျပါသလဲ။ ဖမျးဆီးတာမြိုးလုပျနိုငျပါသလား။ ဘယျသူတှေ လုပျနိုငျပါသလဲ၊
ဦးမငျးလှငျဦး ။.။ အဲဒါမြိုးကတော့ အငျတာပို နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမှုတိုကျဖကျြရေး ရဲတပျဖှဲ့ကနေ ဖမျးနိုငျတဲ့အလားလာရှိပါတယျ။ အငျတာပို ကို ဖမျးဝရမျးထုတျနိုငျမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကနြျောတို့နိုငျငံက စဈခေါငျးဆောငျတှကေ Rome Statute ကို လကျမှတျထိုးထားတဲ့နိုငျငံတှေ၊ Common Law ကို လကျမှတျထိုးထားတဲ့နိုငျငံတှကေို သှားရငျတော့ အဖမျးခံရလိမျ့မယျလို့ အကွမျးဖငျြးသိထားပါတယျ။
ကိုဇျောမိုးကြျော။. ။ အခုလို Universal Jurisdiction နိုငျငံတကာ ဥပဒေအရ နိုငျငံတကာတရားရုံးတခုမှာ တရားစှဲဆိုပွီးရငျ၊ ဒီတရားရုံးမှာ တငျသှငျးတဲ့သကျသအေထောကျအထားတှနေဲ့ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေိုအခွခေံပွီး နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျမှုခုံရုံး ICC လို့ တရားရုံးမှာ ဆကျလကျတရားစှဲဆိုတာမြိုးတှေ လုပျလာနိုငျတယျလို့ ဦးမငျးလှငျဦးကသုံး သပျပွော ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ရိုဟင်ဂျာစခန်း သွားရောက်မည်
ICJ မြန်မာအမှု ဗြိတိန်ပါဝင်ဖို့ Burma Campaign UK တောင်းဆို
လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု စစ်ကောင်စီအပေါ် စွဲဆိုချက် အာဂျင်တီးနားတရားရုံး စတင်ကြားနာ